Ingqele yabumba iinkangeleko sentsimbi Abavelisi - China Ingqele senziwa iinkangeleko zesinyithi abaXhasi kunye mveliso
Ingqele eyenziwe ngeBar yeAngle Bar yokuGcina iRack
Ingqele eyenziwe ngentsimbi yebar yentsimbi yenziwa yipleyiti yentsimbi ebandayo okanye umtya wentsimbi, kwaye sisisinyithi esinecala elinamacala amabini ajikeleze omnye komnye. Ubungakanani bayo bodonga abunakwenziwa bucace kuphela, kodwa bunokuyenza lula inkqubo yemveliso kunye nokuphucula ukusebenza kwemveliso.
Isantya esiphakamileyo se-Guardrail Series yoKhuseleko
Isantya esiphezulu W umqadi oqiniswe ngesefu zezona zithintelo zixhaphakileyo kuhola wendlela ezenzelwe ukunqanda isithuthi ukuba singaphumi endleleni kwindawo eyingozi.
I-Thrie beam (i-boram emithathu) i-guardrail ine-anti-crash performance, esebenza ngokubanzi kwindlela eyingozi efana neendlela eziphakamileyo kunye nebhulorho.
Imiqadi yafakwa ngocingo olufanayo lwe-zinc yokugquma okanye i-zinc + yeplastiki yathintela ukukhusela iindawo ezibuthathaka ezibangelwa ngumhlwa kunye nokubola.
I-Photovoltaic Bracket yePhaneli yeSola
Isibiyeli seSolar photovoltaic sisibiyeli esikhethekileyo esenzelwe ukubeka, ukufaka kunye nokulungisa iiphaneli zelanga kwinkqubo yokuvelisa amandla elanga yefotovoltaic. Izinto eziqhelekileyo ziyi-aluminium alloy, i-carbon steel kunye nentsimbi engenasici.
Ukulungiselela ukwandisa amandla okuphuma kwayo yonke inkqubo yokuvelisa umbane ye-photovoltaic, kudityaniswa nejografi, imozulu kunye neemeko zamandla elanga kwindawo yokwakha, izakhiwo ezixhasayo ezilungisa imodyuli yelanga kunye nokuqhelaniswa okuthile, ulungelelwaniso kunye nokushiyeka zihlala ziyintsimbi. izakhiwo kunye nezakhiwo zealuminium alloy, okanye umxube wezi zimbini.
IGi Steel C Purlin yePanama
Ingqele eyenziwe ngentsimbi C Purlin: Olu hlobo lweemveliso lukwimfuno ephezulu ngobukhulu bayo obuguquguqukayo. Sinokubonelela ngobukhulu besayizi 50 * 25mm nangaphezulu ubukhulu. Zonke iiparameter zixhomekeke kwisicelo somthengi. Izinto eziphathekayo kubandakanya umnyama omnyama, isinyithi esinyithiweyo kunye nentsimbi engenasici.